घास काट्ने खुर्केर आयो जोवन हुर्केर गितका गायक रहेनन्
काठमाडौं । घास काट्ने खुर्केर आयो जोवान हुर्केर, ‘पिँढीमा बसेर मेरै बाटो हेरेर मेरी आमा रुँदी हुन् मलाई सम्झेर’ लगायत चर्चित गितमा लोक गायक बुद्धिकृष्ण लामिछानेको असमाहिक निधन भएको छ । निमोनियाबाट ग्र...
कपिल शर्मा शो यसै सालबाट शुरु हुने
मुम्बई । भारतीय हाँस्य कलाकार कपिल शर्मा बैबाहिक बन्धनमा बाँधिएसँगै सन २०१८ को अन्तिम शुक्रबारबाट आफ्नो लोकप्रिय हाँस्य कार्यक्रम कपिल शर्मा शो लिएर आउँदै छन् । २८ डिसेमबर २०१८ मा सुटिङ गरिने उनको उक...
सलमान खानको क्रिसमस मस्ती
मुम्बई। बलिउड हस्ती सलमान खान सधैं चर्चामा रम्न चाहान्छन् । गत मंगलबार उनी क्रिसमस पार्टीमा रमेको चर्चा वलिउडमा स्थान जमाउन सफल भएको छ । सुपरस्टार सलिमान खानले सोसल मिडियामा आफ्नो पारिवारीक क्रिसमस प...
बाजुरा । अकला देवी म्युजिक प्रालीको प्रस्तुतिमा प्रदेशी भुमीमा रहेर पनि नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा योग्दान पुयाउने दिनेश रोकायाको एल्बम “ साउँदीको जेलमा छु” युटुव मार्फत बजारमा सार्वजनिक भएको छ । गाय...
काठमाडौं । मदन पुरस्कार बिजेता साहित्यकार झमक घिमिरेको जीवनीमा आधारित ‘जीवन काँडा कि फूल’ नामक आत्मकथात्मक कृतिमा आधारित भएर निर्माण भएको नेपाली कथानक चलचित्र अगामी चैत २२ देखि देशभरका सिनेमाघरमा आउने...
प्रेमिका गिन्नीसँग कपिल शर्माको विवाह सम्पन्न
एजेन्सी । भारतीय हाँस्य कलाकार कपिल शर्मा प्रेमिका गिन्नी चतरथसँग औपचारिक रुपमा वैवाहिक जीवन शुरु गरेका छन् । गत बुधबार जालान्धरमा सम्पन्न विवाहमा कपिल शर्मा र गिन्नी अत्यन्त खुसी देखिन्थे । हाँस्य...
रजनीकान्तको नयाँ फिल्म ‘पेटा’
दक्षिण भारत । सुपरस्टार रजनीकान्तको ६८ औं जन्मदिन को अबसरमा उनको आउने फिल्म पेटाको टीजर रिलिज गर्दै उनलाई सम्मान गरिएको छ । २.० बाट ठुलो चर्चा बटुल्न सफल दक्षिण भारतीय कलाकार रजनीकान्त पेटामा फेरि ...
ईशा अम्बानीकाे विवाह पूर्व सम्पन्न संगित समारोहमा बियोन्सेको धमाका
उदयपुर । भारतीय उधोगपति एवं व्यापारी मुकेश अम्बानीको सुपुत्री ईशा अम्बानीकाे विवाह अजय र स्वाती पिरामलको सुपत्र आनन्द पिरामल सँग १२ डिसेम्बरमा हुन गइरहेको छ । विवाह पूर्व उदयपुरमा अचानक सम्पन्न गरिएक...
काठमाडौं । यस बर्षको सर्वाेत्कृष्ट नायिका बेनिशा हमाल र सी जी क्रिटिक्स अवार्ड २०७५ बाट सम्मानित रंगकर्मी बिरेन्द्र हमाल सम्मानित भएका छन् । ठकुरी सहयोग सञ्जाल नेपालले नायिका बेनिशा र रंगकर्मी बिरेन्...
साराको केदारनाथ शुक्रबार रिलिज हुँदै
मुम्बई । सैफ अली खान र अमृता सिंहको सुपत्री सारा अली खान अभिनित फिल्म केदारनाथ शुक्रबार रिलिज हुँदैछ । आफ्नो भूमिकालाई लिएर थुप्रै तारिफ बटुलेकी साराले फिल्म प्रति अत्यन्त उत्सुक देखिएकी छिन् । ...
नयाँ दिल्ली । भारतीय फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले गायक नीक जोनस सँग विवाह गर्दै ७५ फुट लामो घंघुट पहिरेकी छिन। एक डिसेम्बरमा इसाई धर्मकाे रीति रिवाज अन्र्तगत अनौंठो रुपमा देखिन उनले ७५ फुट लामो घ...
काठमाडौं। डा. डीआर उपध्यायको शब्द तथा सागर अधिकारी ‘शरद’को स्वर, सङ्गीत रहेको निकै राम्रो गीत ‘लट्ठै बनायो‘’ सार्वजनिक भएको छ । शाहस शाक्यको सङ्गीत संयोजन रहेको गीतको भिडियो डीआर म्युजिक युट्यु मार्फत...
काठमाडौं । नेपाली सेनामा कार्यरत गीतकार सन्तोष थापाको तिमी बाट टाढा हुँदा गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ ।काठमाँडौको त्रिपुरेश्वरस्थित फिल्मशाला टि भी को कार्यालयमा एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश नं ३ का ...
२.० को तुफानी सुरुवात
मुम्बई । रजनीकान्त, अक्षय कुमार र एमी ज्याक्सन जस्ता स्टार कलाकारबाट अभिनित चलचित्र २.० ले बक्स अफिसमा राम्रो सुरुवात गर्न सफल भएको जनाएको छ । फिल्म एक्सपर्ट रमेश बालाले ट्वीट मार्फत जनाए अनुसार २.० ...
निक जोन्स नामको मेहन्दी प्रियंका चोपडाको हातमा सजाईदैं
जोधपुर । भारतीय फिल्म उधोगकी चर्चित नायिका प्रियंका चोपडा आफ्नो मगेतर सँग बिबाह बन्धनमा बाँधिन गइरहेकी छिन् । बिहीबार बेलुका निक जोन्स नामको मेहंन्दी लगाउन निकसँगै जोधपुर पुगेकी छिन् । उम्मेद प्यालेस...
इण्डियन आइडल १० को सेटमा कपिल शर्माले गरे मस्ती
नयाँ दिल्ली । भारतीय हाँस्य कलाकार कपिल शर्मा पछिल्लो समय मिडियामा छाएका छन् । द कपिल शर्मा शो बाट दर्शकमाझ आउन हतारिएका उनी कौन बनेगा करोडपतिको दशौं सिजनमा अमिताभको पाहुना बन्न भ्याइ सकेका छन् । आ...
कपिल शर्मा पुरानै कार्यक्रम लिएर आउँदै
नयाँ दिल्ली । कमेडी किङको छबि बनाएका भारतीय हास्य कलाकार कपिल शर्मा छिट्टै सोनी टिभीमा देखिने भएका छन् । आगामी महिनाको १२ तारिखमा बिबाह बन्धनमा बाँधिने तयारी गरिरहेको कलाकार कपिल शर्मा शाे काे प्रोम...
चर्चीत गायक जस्टीन इसा मसिहा जस्तै बन्न चाहान्छन् !
केहि महिना अघि मात्र हेलि बाल्डविन सँग बिवाह बन्धनमा बाँधिएका क्यानडाली गायक जस्टीन बिबर भन्छन्, प्रेम गर्न सजिलो छैन । तर उनी इसा मसिहाको जस्तै धैर्यवान, दयालु र निश्वार्थ बन्ने कोसिश गरिरहेका छन् । ...
बलिउड । भारतीय फिल्मी उधोगका किंग खानलाई कलिंग सेनाले धम्की दिएको छ । करिब १७ साल पहिले शाहरुख खान अभिनित चलचित्र अशोकालाई लिएर कलिंग सेना प्रमुख हेमन्त रथले भने, शाहरुख खानले उडिसावाशीको अपमान गरे ।...
दीपिका रणवीरको फोटोले गर्माउँदै फिल्मी दुनियाँ
मुम्बई । भारतीय चलचित्र कलाकार दीपिका पादुकोण र रणवीर सिंहको बिबाह पश्चात जारी गरिएका तस्वीर पछि भारतीय फिल्मी दुनियाँ तरंगित भएको छ । आफ्ना लाखौं समर्थकले उत्सुकता पूर्वक हेरेको कलाकारको बिबाह इटाली...